Sidee ayaan u soo dhaweyn kara qaxootiga iyo dadka cusub othe? | USAHello
Sida loo soo dhaweyn cusub ee USA
Sidee ayaan u soo dhaweyn karaan qaxootiga, waddanka u soo guurey, iyo dadka kale ee ay ku joogaan USA? halkan waxaa ku qoran 8 siyaabaha aad ku soo dhawaynaynaa oo cusub galay aad bulshada.
1) Baro sida loo yidhaahdo, Ninkanu oo cusub’ magacyada
Mid ka mid ah wax muhiim ah ee aad u awoodo inuu sameeyo gargaar dadka cusub dareemaan soo dhaweyn wanaagsan ay tahay in ay bartaan sida loo yidhaahdo, Ninkanu magacyadooda. Baro Talooyin ku saabsan sida loo yidhaahdo, Ninkanu magacyada wax uga dhawaajiya shisheeye in aad.
2) Baro xirfadaha si ay ula xiriiraan dadka cusub ee beesha u gaar ah
Buuxi our Dabcan online soo dhawayn si ay u bartaan sida si fiican u soo dhaweyn, taageero, iskaa wax u qabso kula, ama si fudud u ku xidhmaan dadka cusub. Marka aad samaysay, baadhaan our “FindHello” database ururka maxaliga ah si ay u taageeraan.
3) Diyaar u dhagaystaan ​​dareenka dadka deggan aasaasay bulshada aad
Your doorka ugu adag sida doode dadka cusub ka mid ah xubnaha ka yar soo dhawayn aad bulshada gaar ahaan doonaa. In doode wanaagsan loola jeedaa dhagaysto si ixtiraam leh in ay cabsi iyo walwal ka mid ah non-soo dhaweeyo xubnaha bulshada. Haddii aad ka qaadista walaac ay nacayb ama anaanimada, ma waxaad ku guulaysan doonaa quluubta iyo maskaxda.
halkii, qirayaa in wax laga beddelo, iyo aad u ogaato waxa uu yahay rabitaanka ay yihiin. Xusuusi iyaga in qaxootiga, iyo muhaajiriinta kale oo badan sidoo kale, iman maxaa yeelay, waxay isku dayayaan in ay ka fog cabsi iyo colaadaha ka heli, ma keeni iyaga la, iyo in ku biiraan dadka iyo iyaga dareemaan soo dhaweyn wanaagsan yahay ka hortagga ugu wanaagsan ee. Xusuusin awowayaashood soo galootiga ah ayaa sidoo kale waxtar leh kooxaha qaar ka mid ah.
Waxaad sidoo kale laga tilmaami karo wanaagsan in soo galootiga keeno iyaga la. Raadi dhulka caadiga ah by garashada qiimaha la mid ah in dadka cusub ee la-soo dhaweeyo aan xubnaha bulshada - yahay shaqada iyo adkeysiga, diinta iyo dhaqanka bulshada, qiyamka qoyska - iyo in la dhiso aad u doodid ku dhawaad ​​in. Waxaad ka heli doontaa waxaa jira waxyaabo badan oo in kooxaha qaxootiga qaar ka mid ah waxay leeyihiin in caadiga ah la Americans ka badan muxaafidka ah, kuwaas oo ka caraysan sida laga yaabaa in dadka cusub si fudud maxaa yeelay, iyagu ma ay u fahmaan.
4) Iibso maaliyada iyo xirtaan fariin ah oo soo dhaweynayaa in ay ku cusub
Waxaad xiran kartaa fariin ah oo soo dhaweyn marka aad ka soo baxdo iyo ku saabsan ee magaalada aad ku. USAHello iibiyo funaanadaha la fariinta “Welcome. Tani waa gurigaaga, aad” sideed luqadood oo kala duwan. Soo baxa taageeraan shaqadayada. Iibso shaati hadda.
5) La shaqee aad madaxda magaalada iyo gobolka sheego bulshadaada magaalada soo dhoweyn
soo dhawayn America waa dhaqdhaqaaq qaran oo dhiirigelineysa magaalooyinka iyo tuulooyinka si ay u noqdaan meelo badan loo dhan yahay.
6) Bar carruurta ku saabsan qaxootiga iyo dadka kale ee labada dugsiga iyo guriga
carruurta la baro qaxootigu waxay noqon kartaa caqabad ku ah, laakiin sidoo kale waa wax muhiim ah in la sameeyo. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fikradaha kaa caawinaya in aad la hadasho carruurtaada oo ku saabsan qaxootiga.
7) Kiro oo cusub oo ay bartaan dhaqanka shaqada loo dhan yahay
Cilmi baaris ayaa muujisay qaxootiga iyo dadka kale ee ku jira qaybo aad u qiimo badan ee shaqaalaha. iyaga oo shaqaalaysiinaysa! Markaasuu, fiirso siyaabaha si kor loogu qaado barashada luqadda Ingiriisiga shaqada. shirkadda ku siin karaan shaqaale waqti inta ay shaqalaaha si ay u helaan ay GED® shahaadado isticmaalaya GED free® Dabcan diyaarinta.
Haddii aad raadinayso taageero dheeraad ah oo ku saabsan sida inuu shaqaalayaal u kireeyo iyo shaqaalaha kuwaas oo qaxooti ah ama soo galooti shaqeeyaan, waxaad ka heli kartaa ilo dheeraad ah iyo taageero farsamo ka saaxiibadeena at Advantage sare.
Haddii aad leedahay ganacsi, fadlan saxeex ah Waxaan Kiro Qaxootiga lagu dhawaaqo maanta! xitaa haddii aadan ku jirnaa boos inuu shaqaalayaal u kireeyo qaxootiga, waxaad weli u saxiixi karaan dhawaaqo si ay u taageeraan iyo qaxootiga soo dhaweyn. Aynu hadlo oo cod buunkii ku saabsan sida qaxootiga dhigi shirkadaha our, dhaqaalaha iyo bulshada xoog iyo ka hor dadaallada in ay taageeraan dib u dejinta qaxootiga.
8) Qorshee ama ka qayb galaan munaasabad loogu talagalay Maalinta Qaxootiga Adduunka ama Week dhawayn
Maalinta Qaxootiga Adduunka (June 20-) waa maalin ay u dabaal, xoog iyo adkeysi qaxootiga dunida dacaladeeda. Jaaliyado badan oo dhacdooyinka ciidankii United States inta lagu guda jiro bisha June. Isbuuca soo dhawayn la xusaa September kasta. Booqo saaxiibada our at WeAreAllAmerica.org si aad u hesho dhacdo in aad bulshada.
6 siyaabo kaa caawin kara qaxootiga NOW
carruurta la baro qaxootiga
Noqo ciidan soo dhaweeyo
Maxaad shaqaalaynta qaxootiga waa u dhaqaaqo smart
Waa maxay Maalinta Qaxootiga Adduunka?
Lix siyaabood oo soo dhaweyn oo cusub
Help qaxootiga iyo muhaajiriinta ee Maraykanka
By ugu deeqday USAHello, aad taageeraan technology iyo waxbarashada in gargaar dadka cusub ku guulaystaan ​​USA.